Izindaba - Umbiko Okhethekile We-TV we-NEWGENE Novel Coronavirus Antigen Product eSpain
Umbiko we-TV Special we-NEWGENE Novel Coronavirus Antigen Product eSpain
Umkhiqizo weNewGENE Novel Coronavirus Antigen uthole umbiko okhethekile we-TV kumsakazi wendawo waseSpain u-Antena3. Imikhiqizo ye-NEWGENE ithola ukuthandwa okukhulu futhi yaziwa kabanzi endaweni ngokusebenza kwayo okuphezulu nokusebenziseka kalula.
Njengamanje, imikhiqizo yochungechunge lokuthola i-NEWGENE Novel Coronavirus ibhalisiwe e-Italy, e-Argentina, ePeru, e-Ecuador njll futhi isidlulile ukuqinisekiswa komtholampilo kumalebhu ngokusebenza okuhle. Imikhiqizo ye-NEWGENE ithengiswe emazweni nasezifundeni ezingaphezu kwama-30. INEWGENE izinikele ekufakeni isandla emkhankasweni wokulwa nobhubhane.
I-NEWGENE ithuthukise izinsizakusebenza zokubambisana ezinhlelweni zezokwelapha nezempilo zomhlaba, futhi isungule ukubambisana okuhlala isikhathi eside nokuzinzile emazweni amaningi ase-Europe, e-Southeast Asia, eMiddle East, e-Afrika, eLatin America nakwezinye izifunda, futhi izinikele ekunikezeni amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphezulu kanye nezinsizakalo. I-NEWGENE izoqhubeka nokusebenzela injongo yezempilo yabantu ngezinzuzo zayo ezihlukile kwezobuchwepheshe.
Inethiwekhi yezokumaketha neyensizakalo yeYinye yezokwelapha ihlanganise zonke izifunda zomhlaba. Inhloso yenkampani "ukuThuthukisa i-Biotechnology Nokuhlomula Ngempilo Yabantu".
I-N5-809, isikhungo somhlaba wonke, i-1700 Tianfu Avenue North, i-high tech Zone, iChengdu, iSichuan, China